Taariikhda cherry hybrid iyo cherry bilaabay qarnigii XVII ka dib markii pollination rabitaanka laba dalag oo miro. Thanks to shaqada ee jilayaasha, Beelaha ama shinbiraha, sida loogu yeedho, waxay noqdeen kuwo waxtar badan, adkaysi u ah xaaladaha cimilada iyo awood u leh fruiting. "Miracle Cherry": Tilmaamaha iyo Tilmaamaha Khudaarta Miracle "Miracle Cherry" ayaa u muuqday natiijada shaqada Fiisooyinka ee Yukreeniyaan L.
Qarsoonaanta beerashada guuleysiga ee sakura ee dhexda dhexe
Inkasta oo wadamada Gobalka CIS aysan geedkan ku korin xaalado dabiici ah, laakiin qof kastaa wuu ogyahay, maxaa yeelay waa wax aan macquul aheyn in la fiiriyo ubaxyada sakura. Qoryaha ubaxa ah ee ubaxa waxay ku guuleystaan ​​dadka degan Japan iyo Shiinaha, laakiin sidoo kale qaar badan oo Yurubiyiin ah, kuwaas oo faafitaanka sakura la xiriiro. Maanta waxaan ku ogaan doonaa sida loo abuuro sakura, waa maxay geedkan, iyo sidoo kale ka hadlaan daryeelka xanaanada.
Cherry "Chernokorka": sifooyinka, siraha ee beerashada guuleysiga
Waxaa ka mid ah miro acidic inta badan ee cherry waxaa jira noocyo kala duwan oo ku kala duwan ee cufan cufan oo waaweyn oo casiir leh, iyada oo aan sida caadiga ah acid xoog leh. Cherry Chernokorka cherry, kaas oo si guul leh koray on territory ee Ukraine iyo gobolada qaar ee Russia muddo ka badan hal sano ah, mid ka mid ah kuwa. In sifeynta noocyo kala duwan waxaa jira waxyaalo badan oo xiiso leh, taas oo aan hadda sheegi doono.
Cherry "Abundant": sifooyinka, faa'iidooyinka iyo faa'iido darrada
Rabitaanka beeraha dhadhan fiican leh oo koray dhulkooda, dad badan oo xagaa jooga xagaaga ayaa baranaya dabeecadaha noocyada kala duwan ee geedaha miraha iyo duurka muddo dheer si ay u helaan natiijo wanaagsan oo ka dhalatay dhammaan dadaalkooda. Xaqiiqdii, doorashada waa mid ballaadhan, laakiin in maqaalkani waxaan ku siin doonaa fiiro gaar ah oo Cherry "Faa'iido", taas oo, inkastoo ay iska leh noocyo goor dambe-Bisaylkiisa, laakiin waxay leedahay jadwalka sare iyo qaar ka mid ah faa'iidooyinka kale ee lagu sheegay sharaxaadda kala duwan.
Cherry "Mayak": sharaxaada kala duwan
Dadka yurubiyanku waxay muddo dheer qadariyaan jilicsan qurux badan, laakiin maaha wax geedo ah. Ma u dulqaadanayo dhaxan mana waligeed bixinayso dalag goosasho ah. Si kastaba ha ahaatee, jeeriga dheer-noolaa ee noocyo kala duwan Mayak waa kala duwan yihiin midho weyn oo casiir leh iyo caabbinta sare ma aha oo kaliya qaboobaha qabow, laakiin sidoo kale kulayl kulul. Noocyada noocyada kala duwan, waxaan ka fiirsan doonaa maqaalkan.
Daaweynta Coccomycosis: goorta iyo sida loo daweeyo geedaha xanuunka
Cherry waa mid ka mid ah dalagyada ugu caansan ee beerahayaga. Dad badan ayaa si qalad ah u aaminsan in geedaha aysan u baahnayn daryeel gaar ah oo ay u koraan si madax-bannaan, hawsha beerta kaliya waa inay goosato. Si kastaba ha ahaatee, tani ma aha kiiska, waxay badanaa la kulmaan cudurada, kuwaas oo intooda badan ay yihiin halis, iyo jeeriga ma aha mid ka reeban.
Cherry waa mid ka mid ah geedaha ugu caansan. Waxay jecel tahay qoraxda iyo cimilada diiran, laakiin waxay ku xidhan kartaa xaaladaha kale ee cimilada ah. Haddii aad raacdo talooyinka ku saabsan dayactirka geedka, ma aha kaliya uun fadlan inaad goosato. Waxaa si gaar ah muhiim u ah in la raaco xeerarka beeralayda ku nool aag leh jawi adag oo adag.
Geedka cherry wuxuu aad ugu badan yahay aagahayaga. Dabcan, waa unpretentious iyo dhirta miraha leh dhirta dhadhan fiican leh iyo caafimaad leh, hodan ku fitamiin. Jerriga waxay leeyihiin hal dhibic oo keliya: xilli ciyaareedkoodu si dhakhso ah ayuu u dhacaa, iyo haddii aad seegto sanadkan, waxaa lagaa tagi doonaa adigoon lahayn macaanka, macaanka, jajabyada jiilaalka iyo diyaarinta kale.
Waa maxay sababta jeeriga qalalan: ka hortagga iyo daaweynta moniliosis on jeeriga iyo jeeriga
Waxaa jira cuduro badan oo ah jeeriga iyo jeeriga, kuwaas oo bixiya tallaabooyin gaar ah oo ka hortagga iyo daaweynta cudurrada. Moniliasis ama gubasho monilial waa cudur ku yimaada iyada oo hoos imanaysa saameynta foosaska fungal. Cudurkaani wuxuu ku badan yahay qaaradda Eurasian iyo ku dhowaad dhammaan geedo cherry ama cherry ah ayaa saameeyay ugu yaraan hal mar.
Xilliga jiilaalka barafka ah: intee in la keydin karaa, sida loo jabiyo iyo waxa la sameeyo
Xilliga xagaaga, waxaa naloo isticmaali jiray miraha kala duwan iyada oo aan xaddidneyn. Laakiin habka dayrta, yaabab badan oo ku saabsan barafoobida ee miraha iyo berry, xilliga qaboobaha si ay u isticmaalaan ilaha dheeraadka ah ee fitamiinada. Cherry waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay mid ku habboon kaydinta muddada dheer, waxaa ku jira xaddi badan oo fiitamiin ah, wuxuu si fiican u ilaaliyaa dhadhanka iyo hantida faa'iido leh xitaa ka dib kaydinta muddada dheer ee qaboojiyaha.
Ilaalinta jeeriga iyo jeeriga laga bilaabo xayawaanka, shimbiraha iyo shimbiraha kale
Guryaha xagaaga iyo beeralayda badanaa waxay la kulmaan xaqiiqda ah in jeeriga iyo jeeriga ay soo weerarto shimbiraha. Burburin by berry beaks fiiqan ma iibin kartaa, qaar ka mid ah guud ahaan ma ahan ku habboon u isticmaalka aadanaha. Xaaladdan oo kale, ilaalinta shimbiraha ee beerta waa lagama maarmaan. Maqaalkeena waxaan eegi doonaa siyaabo kala duwan si loo ilaaliyo berry.
Xagaaga oo kasta oo deggan xeryaha ayaa koraan geedo miraha iyo berry. Waxaa ka mid ah tirada badan ee noocyada jeeriga, badanaa waxay door bidaan "Miracle Cherry", oo aan ku sharraxnay maqaalkeena. Taariikhda doorashada Xagga ugu caansan ee bannaanka u ku raaxaysta "Miracle cherry". Aan aragno waxa "chaos" cherry.
Ashinskaya Cherry: sifooyinka, faa'iidooyinka iyo faa'iido darrada
Cherry had iyo jeer waxay bixisaa goosashada wanaagsan, taas oo ku saleysan taas oo casiir, kala duwan iyo macmacaan diyaar u yihiin. Sidoo kale, miro guduud ah sababta oo ah qadarka fitamiin C waa mid aan lagama maarmaan u ah dadka ay ku yar tahay sunta. Maantana waxaan ka hadli doonaa cinwaanka Ashinsaya, si kooban u sharax wax kala duwan, iyo sidoo kale qodobbada muhiimka ah ee kaa caawin doona helitaanka sawirka guud ee geedkan.
Cherry "Rummaan Qaboobaha": dabeecada
Malaha, ma jiro gardarre noocan oo kale ah oo jeclaan lahaa inuu beerta beerta yar ku bilaabo beerta, inkastoo wali yar. Inta badan su'aashan waxa ay ku fadhidaa la'aanta boos - geedaha caadiga ah meel yar oo si dhow u dhow, ka dibna noocyo badan oo cufan leh ayaa ka caawiya. Qaar badan oo ka mid ah waa kuwo aan qabin daryeel, marka laga reebo waxay ku faraxsan yihiin wax-soosaarka wanaagsan.
Cherries "Carmine qiimo leh": dabeecad
Waxaa jira noocyo badan oo johannesört ah, oo leh shuruudo kala duwan oo daryeel ah waxayna si aad ah ugu kala duwan yihiin tayadooda. Inta badan noocyada bannaanka u adeegsanaya dalka oo idil, oo ay soo saartey jareeraha gudaha, laakiin maanta waxaan tixgelinaynaa kala duwanaanshaha Kanada ee ajnabiga ah iyo in la go'aamiyo sida ay ugu habboon tahay cimiladeena iyo xaaladaha cimilada.
Cuntada la qalajiyey ma ahan "fashion" hadda, sababtoo ah dukaamada waxaad ka iibsan kartaa wax alaab ah sanadka oo dhan. Laakiin ha iloobin in miraha la qalajiyey ay ka faa'iideysan karaan marka la barafoobo ama laga soo dhoofiyo waddamo fog. Sidoo kale, "qalajinta" waxaa la dhigaa waqti dheer, iyada oo ku saleysan tahay waxaad abuuri kartaa tiro badan oo ka mid ah suxuunta dhadhan fiican leh iyo caafimaad leh.
Geedka lagu beerayo "Shpanka"
Beerta Cherry ayaa aad loogu jecel yahay dalkeenna. Ka dib jiilaalka dheer iyo qabow si aad u tijaabiso cherry cusub! Dadkuna way ogyihiin in noocyada hore ee jeeriga ay tahay "Shpanka". Waxaan ka wada hadli doonaa maqaalkan ku saabsan beerista noocyo kala duwan, oo ku saabsan abuurka haboon ee geedo iyo daryeelka dhirta lagama maarmaanka ah, taas oo xaqiijin doonta goosashada wanaagsan ee jeeriga.
Cherry deeqsinimada: sharaxaad, sifooyinka beeritaanka iyo daryeelka
Marka aad dooranaysid noocyo of cherry for beertay beeray tixgeliyaan tayada badan. Tani iyo sahlan ee beerto, daryeel aan qabyo ahayn, wax-soosaarka sare, wax dhibaato ahna ma leh cayayaanka iyo nooc kasta oo cuduro ah. Cherry Jarmal ayaa ugu habboon shuruudaha xulashada, taas oo caddaynaysa ka dib markii ay akhrinayso sharraxaaddeeda.
Goorta iyo sida loo gooyo cherry xilliga dayrta
Diyaarinta qaboobaha qaboobaha ma aha oo kaliya goosashada timaha, laakiin sidoo kale in lagu diyaariyo beerta beerta iyo khudradda miraha soo socda. In this article waxaan u eegi doonaa goorta si aad u jilcaajiso jeeriga, sida loo diiriyo geedaha dayrta iyo iyaga u diyaariso dhaxan, waa maxay qarsoodiga ah ee ku beerto bahalka khibrad leh. Maxaad u baahan tahay manjooyin dayrta? Xilliga dayrta dhirta laga bilaabo geedaha jirran ama kuwa jirran waa geedi socod muhiim ah oo nuujinaya dhirta.